गृहपृष्ठ » अपराध » अमेरिकामा बलात्कार मुद्धाको हदम्याद विधानमा के छ ?
काठमाडौं । अहिले नेपालमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडितले मुद्धा दर्ता गर्न पाउँने हदम्यादको विषयमा खुबै चर्चा भइरहेको छ ।
एक मोडलले आफू नाबालिक रहेका बेला ८ बर्षअघिको बलात्कारको घटना बाहिर ल्याएपछि उजुरी गर्ने हदम्यादसम्बन्धि कानून परिमार्जनका लागि सर्वत्र अपिल गरिएको छ ।
विश्व कै विकसित देश मानिएको अमेरिकामा बलात्कारको हदम्यादमा के छ ? भन्ने बारेमा हामीले खोजी गरेका छौ ।
अमेरिकामा रहेका सबै राज्यहरुमा एउटै कानून छैन । अधिकांश राज्यहरुमा बलात्कारको उजुरी गर्नका लागि हदबन्दीको कानून छ । केही राज्यहरुमा भने हदबन्दी छैन ।
केही राज्यहरूका लागि तीनदेखि तीस वर्षसम्मको अवधि सामान्य छ। जे होस्, सबै राज्यहरूमा बलात्कारको लागि सीमितताको कानून छैन र आफ्नै कानूनमा अपवादहरू छन्।
सीमितताको विधान के हो ?
सामान्य सर्तहरूमा सीमाहरूको विधान एक समय सीमा हो, जसमा एक व्यक्तिले दावी फाइल गर्न निश्चित समय तोकिएको हुन्छ । यदि समय सीमा समाप्त हुन्छ भने, दाबी पेश गर्न चाहने व्यक्तिलाई त्यसो गर्नबाट रोक लगाइन्छ।
आपराधिक सन्दर्भमा, सीमितताको विधान भनेको समय सीमा हो, जसमा अभियोजकले आरोप दायर तोकिएको समयभित्र गर्नुपर्छ । कतिपय क्षेत्राधिकारहरूमा अपराध भएको वा अपराध पत्ता लागेको मितिबाट कानून चल्न थाल्छ । कतिपयमा पीडितले अधिकारीहरूलाई अपराध रिपोर्ट गरेपछि विधान चल्न थाल्छ।
सीमितताको विधानको उद्देश्य
राज्यहरूले विभिन्न कारणहरूको लागि सीमितताको विधानहरू स्थापना गर्न सक्छन्। उदाहरण को लागि एक विधान अवस्थित हुन सक्छ किनभने यो एक निश्चित समय बितिसके पछि मुद्दा चलाउन गाह्रो हुनेछ ।
साक्षीहरू सार्न वा मर्न सक्छन्। प्रमाण हराउन वा अपमानित हुन सक्छ। समाधान नभएका अपराधहरूको प्रमाण भण्डारण गर्न अपर्याप्त ठाउँ हुन सक्छ।
दार्शनिक रूपमा, राज्यहरूले सीमितताहरूको नियमहरू स्थापना गर्न सक्छन् ताकि अपराधी आफ्नो जीवनभरि शुद्धीकरणमा बाँच्न नपरोस्। कुनै बिन्दुमा प्रतिवादीले आफ्नो अपराधको लागि कानूनी रूपमा प्रायश्चित गर्न आवश्यक पर्ने समयको बिन्दु पार गर्न सक्छ।
बलात्कार अपराधमा हदबन्दी
हदबन्दीको विधान लागू हुन सक्नु अघि कथित अपराध बलात्कारको परिभाषा अन्तर्गत पर्दछ। प्रत्येक राज्यको अपराधको आफ्नै परिभाषा छ। सामान्य कानूनमा बलात्कारलाई व्यक्तिको सहमति बिना जबरजस्ती, गैरकानूनी यौन सम्बन्धको रूपमा परिभाषित गरिएको थियो।
यस परिभाषाको आधारमा, बलात्कारले पति–पत्नीहरू बीचको अन्तरक्रियालाई बहिष्कार गरेकोपनि देखिन्छ । अहिले महिलाको गोप्य अंगमा असहमतिका बावजुद पुरुषको गोप्य अंग प्रवेश गराएमा त्यसलाई बलात्कार मान्न थालिएको छ ।
कतिपय क्षेत्राधिकारहरूले यो परिभाषा राख्दा, अरूले यसलाई विशेष रूपमा प्रवेश आवश्यक नहुने जबरजस्ती यौन कार्यको रूपमा परिमार्जन समेत गरेका छन्।
अमेरिकाको दण्ड संहिताले बलात्कारलाई पुरुषको बल प्रयोग वा महिलामाथि बल प्रयोग गर्दा हुने यौनसम्बन्धलाई परिभाषित गरेको छ । बलात्कारलाई विभिन्न दण्डहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यौन दुर्व्यवहारमा बलात्कारको तुलनामा छोटो कानूनी सीमितता छ ।
दश वर्ष वा कम
धेरै क्षेत्राधिकारहरूमा दश वर्ष वा कमको लागि सीमितताको विधान छ। क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस, आयोवा, मोन्टाना, टेक्सास र वाशिंगटनमा दश वर्षको सीमा छ। यी राज्यमा बालात्कार भएको दश बर्षपछिपनि पीडितले मुद्धा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
माइनकोमा आठ वर्षको हदम्याद छ भने नर्थ डकोटाको सात वर्षको विधान छ भने ओरेगन, भर्मन्ट, अर्कान्सास, न्यू ह्याम्पशायर र हवाईमा छ वर्षको सीमा तोकिएको छ । कनेक्टिकटमा पाँच वर्षको विधान छ र फ्लोरिडाको चार वर्षको विधान छ। मिनेसोटासँग तीन वर्षको सीमितताको सबैभन्दा छोटो विधान छ।
दश वर्षभन्दा बढी
केही राज्यहरूमा दश वर्षभन्दा लामो समयावधिका सीमाहरू छन्। उदाहरणका लागि, पेन्सिलभेनियामा बाह्र वर्षको सीमा छ। जर्जिया, म्यासाचुसेट्स र वाशिंगटन, डी.सी. मा बलात्कार भएको पन्ध्र वर्षपछि मुद्धा दर्ता गर्न पाउँने कानून छ। ओहायोमा बलात्कार भएको २० बर्षपछि कानूनी लडाई लड्न पाउँने सीमा छ।
बलात्कारको लागि सीमाको कानून भएका राज्यहरूका लागि तिनीहरूमध्ये धेरैसँग डीएनए परीक्षणको सन्दर्भमा अपवाद छ।
उदाहरणका लागि केहि राज्यहरुको एक सामान्य कानून हुन सक्छ तर त्यसपछि एक अपवाद समावेश गर्दछ यदि सामान्य कानून चल्ने अवस्था आएपछि मात्र डीएनए परीक्षण गर्न सक्छन् । नत्र आरोपिको बयान र अरु प्रमाणका आधारमा पीडितलाई नभेटि प्रहरी र अदालतले मुद्धा किनारा लगाउँन सक्छ ।
अमेरिकाका केही राज्यहरुमा यदि निश्चित उमेर मुनिको बच्चा पीडित भएको खण्डमा सीमितताहरूको लामो कानुन छ । त्यस्तै गरी केही राज्यहरूले कानूनको लागि अवधि नै तोकेको छैन ।
अपराधि जानाजानी अभियोजनबाट बच्न भाग्छ वा अर्को राज्यमा बस्छ भनेपनि कुनै समयको सीमा छैन ।
धेरै राज्यहरूमा केही प्रकारका बलात्कार वा सबै बलात्कार अपराधहरूका लागि सीमितताको कानुन छैन। यी राज्यहरूमा अलाबामा, अलास्का, एरिजोना, डेलावेयर, इडाहो, इन्डियाना, कन्सास, केन्टकी, लुइसियाना, मेरील्याण्ड, मिशिगन, मिसिसिपी, मिसौरी, नेब्रास्का, नेभाडा, न्यू जर्सी, न्यू मेक्सिको, न्यूयोर्क, नर्थ क्यारोलिना, ओक्लाहोमा, रोड आइल्याण्ड, साउथ क्यारोलिना, साउथ डकोटा, टेनेसी, उटा, भर्जिनिया, वेस्ट भर्जिनिया, विस्कॉन्सिन र वायोमिङ रहेका छन् ।
विश्वका विकसित देशहरुले हदम्याद लामो समयका लागि राखेका छन् भने नेपालले किन व्यवस्था नगर्ने ? यसको प्रयोग नेपालले किन नगर्ने ? कानून परिमार्जन गरेर नारीहरुको रक्षामा नेपाल राज्य लाग्नुपर्छ ।
पीडितले न्याय पाएपछि र अपराधीले सजाय पाएपछि न्यायको समयसीमा हुनुपर्छ भन्ने सोच्नु उचित र तर्कसंगत हो । तर, राष्ट्रिय दण्ड संहिता ऐन २०१७, अध्याय १८, दफा २२९ (२), हदबन्दीको विधानले “बलात्कार, यौनजन्य कुनै पनि अपराध गरेको मितिले एक वर्ष नाघेपछि कुनै उजुरी आउन पाइने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । उत्पीडन, बाल यौन दुव्र्यवहार, लगायत गम्भीर अपराधमा समेत छोटो अवधि हुँदा पीडितले न्याय पाएका छैनन् ।